Uyiphuhlisa njani iskripthi okanye irundown yokukunceda ubhale inoveli yakho | Uncwadi lwangoku
Uyibhala njani inoveli: ukwenza iskripthi okanye ukuhla kwelanga
UDiego Calatayud | | Inoveli
Xa saqala bhala inoveli, asiqali kwasekuqaleni. Kancinci njengoko kunjalo, sinombono yeziganeko eziza kwenzeka, zabalinganiswa abazakuthatha inxaxheba kuyo kunye neendawo ezithile esizicingileyo.
Kwabaninzi oko kwanele ukujongana nephepha elingenanto kwaye baqale ukubhala, kodwa uninzi lweencwadana malunga nokudalwa kwamabali ziyacebisa Ukucaciswa kweskripthi okanye urundown esivumela ukuba sicwangcise okungaphezulu okanye ngaphantsi kwinto esiza kuyithetha kwaye oko kuyakonyusa, njengoko siza kubona, ezinye iinkalo zenoveli ezinje ngobungqina bayo kunye nobungqina bayo.
Kule posi siza kukunika ezinye iimbono malunga nendlela yokudala i-rundown enjalo kwaye siza kuthetha ngezinye zeenzuzo zayo.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, intsholongwane iyakuba luvo lokuqala esinalo, olunokuthi luzenzekele okanye lube lujikeleze intloko yethu ixesha elide, kodwa phantse ngokuqinisekileyo kufuneka silwandise ukuze senze irundown. Inkqubo elungileyo yoku kukucinga. Imalunga nokuthatha iphepha nepeni kwaye ubhale yonke into eyenzekayo kuthi, iinyani, izigcawu eziza kwenzeka, oonobangela kunye neziphumo zesiganeko ngasinye, izizathu zabalinganiswa, njl.
Nje ukuba yonke loo nto iqale, siza kuqala ukukhulisa iskripthi esiza kubandakanya Iinkcukacha ngokubhaliweyo okwenzekayo kwicandelo ngalinye, isahluko okanye indawo (kuxhomekeke kwindlela esikrelekrele ngayo) ukuze sibe nesikhokelo esivumela ukuba sigxile kwinxalenye esemthethweni xa sibhala endaweni yokuba siqhubeke nokukhathazeka ngokwenza umxholo. Iinkcukacha zerundown ngokwayo ixhomekeke kukhetho lomntu wonke, kodwa njengomgaqo ngokubanzi, ulwazi oluninzi oluqulathiweyo, lungcono, ukusukela ngoko siyakuba nenkululeko yokusebenzisa ezo zimvo okanye sizilahle. Ayisibopheleli, kodwa inokusinceda ngamaxesha okuvaleka.
Kanjalo, ukubuya kwayo akuyingcweleOko kukuthi, ayingabo bonke ababhali abayisebenzisayo, kwaye ayisiyiyo yonke into equlethweyo ekufuneka ivele ngendlela enyanzelekileyo kuhlobo lokugqibela lomsebenzi: izinto zinokulungiswa, zongezwe okanye zisuswe njengoko siqhubeka ekubhaleni inoveli.
Yiyo loo nto Izinto eziphambili eziluncedo ekusebenzeni neskripthi okanye ukuncipha koku kulandelayo:
Isivumela ukuba sigxile kwinxalenye esemthethweni yenoveli ngexesha lokubhalwa kwayo, ngaloo ndlela Umba weelwimi uya komelezwa.
Yiyo umanyano olungileyo ngokuchasene neebhloko.
Isivumela ukuba singalibali naluphi na uluvo kwaye ngokukhulula ingqondo ekubeni ikhumbule yonke into esele inayo engqondweni ukuba yenzeke, izimvo ezintsha zinokuvela.
Inyani yokuba unayo ithambo kwinoveli, ngaphambi kokuyibhala, ivumela ukuba ngokukhawuleza kwaye ngokubonakalayo siqonde izinto ezithile ezisisiseko sayo ezinjengezizathu. Ngale ndlela kulula ukutyebisa la manqaku apho sinokusilela khona. Iya kuhlala ixabisa kancinci kunokucebisa ngemiba ethile yenoveli esele ibhaliwe.
Okokugqibela, kunokuba luncedo kuthi ngokolandelelwano esinika ngalo iinyani. Xa uzibona zibanjiwe ngendlela emfutshane Kunokuba lula kuthi ukuba nomfanekiso ngqondweni wentetho eyahlukileyo efanayo okanye kolunye uhlobo locwangco oluthanda uxinzelelo okanye iqhinga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uyibhala njani inoveli: ukwenza iskripthi okanye ukuhla kwelanga
I-beta phaya sitsho
Inqaku elimnandi neliluncedo. Ngaphandle kwamathandabuzo, irundown sisixhobo esihle esimele ukuhlala siqwalaselwa kulo naliphi na ibali, sinceda kakhulu.
Phendula kwi-beta phaya
UJudith Kerr, umbhali xa uHitler Wawubamba uMvundla oPinki, wasweleka
U-ularsula Iguarán: umzobo wabasetyhini baseLatin America eMacondo